ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: November 2009
၁။ မိတ်ဖွဲ့တယ်၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း စုဆောင်းတယ်သူငယ်ချင်းတွေအကြား ယုံကြည်စွာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရင်းနှီးခင်မင်မှုမျိုးဟာဘဝတစ်
သက်တာ အတွက် အကောင်းဆုံး အနွေးထည်ပါပဲ။ အဲဒါဟာ သင့်ရဲ့ စာရိတ္တနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဖြစ်တည်လာတဲ့အတွက် တန်ဖိုးထားပါ။
သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ငွေစုသလိုပဲစုဆောင်းတတ်ရမယ်၊ အခုချိန်မှာသူငယ်ချင်း ဘယ်နှယောက်မှ မရှိသေးပဲ ချို့တဲ့နေရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့၊ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ စိတ်ပါလက်ပါ မိတ်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင် အခါမနှောင်းသေးပါဘူး။
၂။ လက်လွှတ်နိုင်အောင်(ဥပက္ခာပြုတတ်ေ အာင်) ကြိုးစားတယ်ဒီအသက်အရွယ် ရောက်နေမှတော့ ကလေး ဆန်ခွင့် မရှိတော့ဘူး။ ဘဝမှာကုံရဆုံရတတ်တဲ့ တချို့သော ချစ်ခြင်းတွေ၊ ဖူးစာတွေ၊ စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်း မွေ့လျော်ရာတွေ တစုံတရာကို အခွင့်ပေးတုန်း အရမယူနိုင်ခဲ့ရင်လက်လွှတ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် တာထွက်မှတ် အသစ်တစ်ခု ပြန်ပေးပါ။မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိနေသ၍ အင်အားရှိနေမယ်၊ ထို့အတူ အားထုတ်မှုရှိနေသ၍ အောင်မြင်ခြင်း ရှိနေမှာပဲ။
၃။၊ ဂရုဏာစိတ်ထားတယ်တတ်စွမ်းသ၍ ကိုယ့်ထက် ဆင်းရဲ၊ ခက်ခဲသူတွေကို မိခင်လောကကြီးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်နဲ့ အလှတရားတွေကို ခံစားနိုင်အောင် ကြံဆောင်ရမယ်။ဒီလို အပြုအမူမျိုးဟာ ပျိုးကြဲနေတာနဲ့ အတူတူပဲ၊ တချိန်ချိန်မှာလူ့သဘာဝရဲ့ အလှပဆုံး အသီးအနှံတွေအဖြစ် ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်။
၄။ ဂီတနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်နေတယ်ဂီတတူရိယာ တမျိုးမျိုးကို သင်ယူ/နားလည် နေရမယ်၊ ဂီတဟာ လူ့စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေတဲ့အပြင် မှတ်ဥာဏ်နဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို နှိုးဆွပေးတယ်၊ထင်မှတ်မထားတဲ့ တည်ငြိမ်မှုတွေကို ဆောင်ကြဉ်း ပေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီးဓာတ်ပုံပညာ၊ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းစတဲ့ဝါသနာတွေဟာ လည်း အသွင်မတူတဲသာယာစိုပြေမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်။
၅။ ဒုက္ခ ၂ မျိုးကို ဝေးဝေးရှောင်တယ်ဒီလောကကြီးမှာ ဒုက္ခ ၂ မျိုး အမြဲတွေ့ရတယ်၊ တမျိုးက လိုတာမရတဲ့ ဒုက္ခ၊
နောက်တမျိုးက အစွဲအလန်း ကြီးတဲ့ဒုက္ခ။ ပထမဒုက္ခဖြစ်တဲ့ လိုချင်တာမရခဲ့ရင်အဲသလို ဖြစ်စဉ်ကို လောင်းကစား တစ်ခုလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ၊ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလုပ်ခဲ့ပြီး ရလာခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မရခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အတွင်းစိတ်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲ ရှိနေသင့်တယ်၊ ကံကောင်းတာက ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ တစ် ကပြန်စဖို့ အရင်းအနှီး ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာပဲ။ ဒုတိယဒုက္ခကတော့အဆုံးရွားဆိုးဒုက္ခပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ အခုထိ အဲလို အစွဲအလန်းမျိုးရှိနေသေးရင် အမြန်ဆုံး မောင်းထုတ်ပစ်ပါ။
၆။၊ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားတယ်တချို့အဖြစ်အပျက်တွေဟာ မသိမသာ မေ့ပစ်ဖို့ပဲ၊ နောင်တကြိမ် ထပ်ကြုံလာတဲ့အခါအသိဥာဏ်လည်း လိုက်ပြီး တိုးပွားလာမယ်။ တချို့ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်ညစ်ညူးစရာကိစ္စတွေ ကျတော့ အံကြိတ်ပြီး တောင့်ခံဖို့ပဲ၊ တကြိမ်တခါ ကြုံဖူးပြီးတိုင်းဘဝကြီးက ပိုပြီး ပြည့်စုံလာမှာပဲဒီအသက်အရွယ် ရောက်မှတော့ကလေးဘဝတုန်းကလို အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေဖို့မသင့်တော့ဘူး။
၇။ အမြဲတစေ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့စိတ်ထားတယ်အသုဘတစ်ခုကို သွားပြီးပြန်လာတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ သံဝေဂ ရနေတတ်မယ်၊အပြင်းဖျားပြီး ပြန်ကောင်း လာတဲ့အခါ အသက်ကို ပိုပြီး တန်ဖိုးထားလာတတ်မယ်။ဆိုလိုတာက ကိုယ့်အပေါ် ကျရောက်နေတဲ့ ကျေးဇူးတရားကို အစဉ်အမြဲအမှတ်ရနေရမယ်၊ ကျေးဇူးသိတဲ့စိတ်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုပြီးတန်ဖိုးထားတတ်စေရုံတင် မကပဲ လောဘ ဒေါသ မောဟ မီးလျှံတွေကိုချုပ် ငြိမ်းစေနိုင်တယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကြည်နူးချမ်းမြေ့ခြင်းက အဲဒီကမြစ်ဖျားခံတာပဲ။
၈။၊ အလုပ်အပေါ် သံယောဇဉ်အရမ်းရှိတယ်အလုပ်ဆိုတာ လက်ဖက်ရည်သောက်တာ၊ အာလူးဖုတ်တာလိုမျိုး စိတ်လက်ပေါ့ပါးမှုမပေးနိုင်ပေမယ့် သူဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးနဲ့ အစွမ်းအစကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ။ အဲဒီက တဆင့် တန်ဖိုးနဲ့ အောင်မြင်ခြင်းကိုနားလည်စေတာပဲ။ သူ့ကို ပုံအောပြီးချစ်လိုက်ပါ၊ အနည်းဆုံး သူ့ကြောင့်မို့သာကျွန်တော်တို့ ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ အစိပ်အပိုင်း တော်တော်များများမှာလုပ်စရာရှိနေပြီး၊ စားစရာလည်း ရှိနေတာပါ။
၉။၊ လေ့လာသင်ယူရာမှာ ဇွဲနပဲကြီးတယ်စာဖတ်ခြင်းနဲ့ သင်ယူခြင်းဟာ အသိဥာဏ်နဲ့ စကားစမြည် ပြောနေတာပါပဲ၊နှစ်တိုင်း အနည်းဆုံး စာအုပ်ရေ ၅၀ ဖတ်ရမယ်။ စာဖတ်ခြင်းဟာ မှတ်ဥာဏ်နဲ့ ခံစားနားလည် နိုင်စွမ်းကို ထိန်းထားနိုင်ရုံမက စာဖတ်သူမှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သံလိုက်ဓာတ်တမျိုး ရှိနေစေ တယ်။ ဒါဟာလည်း yogaသင်တန်းတို့၊ ဗျူတီပါလာတို့က မပေးနိုင်တဲ့ အရာပါ။
၁၀။၊ အားကစားကို ခုံမင်နှစ်ခြိုက်တယ်အချိန်ကို မှန်ကန်စွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး အားကစားလုပ်တယ်၊ သဘာဝကို ခံစားတယ်။အကျိုးကျေးဇူးက ပျင်းရိခြင်းကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် တက်မလာတော့ဘူး၊ရုပ်ရည်ကလည်း ဇရာဖိစီးမှုကြောင့် ယိုယွင်း မသွားတော့ဘူး၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ နုပျိုခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ကျန်းမာခြင်းကိုထိန်းထားနိုင်လိမ့်မယ်။
Posted by Crystal at 11:42 PM0comments
၆ ပတ်၊ ၆ လ၊ ၆ နှစ်
၆ ပတ် - ချစ်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ ချစ်တယ်။
၆ လ - ချစ်တာပေါ့ကွာ။
၆ နှစ် - မင်းကို ငါ မချစ်ရင် အစကတည်းက အားအားယားယား ချစ်ခွင့်တောင်းမလားဟ။
၆ ပတ် - အချစ်ရေ၊ ကိုယ်ပြန်လာပြီ။
၆ လ - ငါပြန်လာပြီကွ။
၆ နှစ် - မင်းအမေ ကနေ.ဘာဟင်းချက်တုန်း။
၆ ပတ် - အချစ်ရေ၊ မင်းဒီလက်စွပ်လေး သဘောကျလိမ့်မယ်လို. မျှော်လင့်တယ်။
၆ လ - ပန်းချီးကား တချပ်ဝယ်လာတယ်၊ ဧည့်ခန်းမှာထားရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
၆ နှစ် - ရော့ ပိုက်ဆံ။ နင့်ဖာသာ ကြိုက်တာသွားဝယ်။
၆ ပတ် - အချစ်ရေ၊ ဖုန်းလာနေတယ်။
၆ လ - ရော့၊ နင့်ဖုန်း။
၆ နှစ် - နင့်ဖုန်းမြည်နေတယ်၊ မြန်မြန်လာကိုင်။
၆ ပတ် - မင်းဒီလောက် ဟင်းချက်ကောင်းလိမ့်လို. မထင်ခဲ့ဘူးကွာ။
၆ လ - ကနေ.ညစာ ငါတို.ဘာစားကြမှာလဲ။
၆ နှစ် - လာပြန်ပြီ။ဒီဟင်း။
၆ ပတ် - မင်း ဒီအကျီလေး ၀တ်လိုက်တော့ နတ်သမီးလေးလား အောက်မေ့၇တယ်ကွာ။
၆ လ - အကျီအသစ် ၀ယ်ပြန်ပလား။
၆ နှစ် - အဲ့ ဒါ ဘယ်လောက်တောင် ပေးလိုက်ရတုန်း။ ကုန်ပါပြီ။
၆ ပတ် - ငပလီကို ၁ပတ်လောက် အပန်းဖြေခရီးသွားရအောင်လေ၊ တခြားဘယ်နေရာ
၆ လ - ငပလီကို မသွားချင်ဘူး ဟုတ်လား၊ ။ ဂျီးများမနေနဲ.။
၆ နှစ် - ဘာ!! ခရီးသွားဦး မယ်။ အိမ်မှာနေရတာ ဘာပြုနေလို. အားတိုင်း
၆ ပတ် - ကနေ.ည ဘာကားကြည့်ချင်လဲ အချစ်။
၆ လ - ငါဒီကား ကြိုက်တယ်။တခြား Channel မပြောင်းနဲ.။
၆ နှစ် - ငါကနေ.ည ESPN လိုင်းကြည့်မှာ၊ မကြည့် ချင် ရင်စောစောသွား အိပ်။
ဖခင် ဖြစ်သူက သူ.သား မင်္ဂလာဦးညတွင် သေနတ် တစ်ချောင်း ပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ပြောသည် “မင်းမိန်းမက အပျိုစင်စစ်ဆို ရင် ဒီသေနတ် နဲ. မိုးပေါ်ကို တစ်ချက် ပစ်ဖောက်လိုက်။ တကယ်လို. အပျိုမဟုတ်ခဲ့ရင် သူမကို ပစ်ထည့် ပလိုက် ကြားလား”။
ဟုတ်ကဲ့ လို့ပြန်ဖြေလိုက်သော သားဖြစ်သူက ထိုမင်္ဂလာဦးညတွင် သေနတ်ဖြင့် မိုးပေါ်သို. ထောင်၍ တစ်ချက် ပစ်ဖောက်လိုက်ပြီး ၊ ဒုတိယညမှာတော့ သေနတ်ဖြင့် သူ.မိန်းမ ကို ပစ်ထည့်လိုက်လေသည်။
Posted by WHITEROSE at 3:28 PM0comments
ဒီကြော်ငြာကို အရမ်းကြိုက်မိပါတယ်။ ပုံကြည့်တာနဲ့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမလိုအောင် သိသာနိုင်တဲ့ ကြော်ငြာလေးပါ။ အိုင်တီခေတ်တဲ့.. ကွန်ပြူတာတွေ၊ ဖုန်းတွေ၊ အီးမေးလ်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ၊ အိမ်သူ အိမ်သား၊ ချစ်သူရည်းစားတွေကို ဆက်သွယ်ရလွယ်တဲ့ ဒီအီးခေတ်မှာ လက်ရေးနဲ့ ရေးတဲ့ စာဆိုတာ အတော်လေးကို ရှားပါးခဲ့ပါပြီ။ အေးစက်စက် ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဖတ်ရတဲ့ စာထက် ကိုယ်တိုင်လက်ရေးနဲ့ ဂရုတစိုက်ရေးတဲ့ စာက ပိုနွေးထွေးတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း.. ဝေးကွာနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ စာလေးတွေနဲ့ ပွေ့ဖက်ပါ။
မီးလောင်နေတဲ့ နေရာကို မီးသတ်ကား အမြန်ရောက်အောင် ကားနဲ့တစ်ဆင့် ပို့ပေးနေတဲ့ ပုံလေးပါ။ Fedex Express ရဲ့ အမြန်ချောပို့ ကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်ကြောင်း ကြော်ငြာထားပေမဲ့ မီးသတ်ဌာနကို ကဲ့ရဲ့တယ်လို့ လူတွေ ထင်စေတဲ့ ကြော်ငြာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ Fedex မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် မီးသတ်ကား အမြဲနောက်ကျမှ ရောက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။း)
သင့်ရဲ့ခံတွင်းဟာ မလျော်မဖွတ်ဘဲ ထားတဲ့ ခြေအိတ်လို အနံ့ထွက်နေပြီလား.. Clorets ပီကေကို ၀ါးလိုက်ပါ။ လျှာကို ခြေအိတ်သဏ္ဍာန် ပြထားတဲ့ Clorets တံဆိပ် ပီကေ ကြော်ငြာလေးပါ။
ဒီကြော်ငြာလေးလည်း ရီရတာပဲ။ bra ကြော်ငြာလို့ အတွေးကောက် မှားပြီး မရီမိဖို့ပဲလိုတယ်။ ဘောလ်ပင် ကြော်ငြာလေးပါ။ ဘယ်လောက်ကြမ်းတဲ့ အရာဝတ္ထုပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးခြစ်နိုင်ကြောင်းကိုရွတ်တွနေတဲ့အသားအရေပေါ်မှာရေးပြပြီးကြော်ငြာထားပါတယ်။ပုံကြည့်လျောက်ခြစ်ထားပါတယ်။“I think pen ad is telling the ink doesn't fade away for ages.” ဒီအတွေးလေးလည်း မှန်နိုင်တာပဲ။ တက်တူး ထိုးထားသလိုပေါ့။ မင်အရောင်က တော်ရုံမမှိန်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း...
ဟိုထဲပဲ ၀င်ပါရစေ။ ဒီထဲ မ၀င်ပါရစေနဲ့။ ပက်စီကိုပဲ ကြိုက်ကြောင်း ပိုက်ပုံသဏ္ဍာန် ကြည့်ပြီး ဥာဏ်မှီသလောက် ပြောကြည့်တာပါ။
ကြိုက်လွန်းလို့ အရည်ညှစ်သောက်နေရသလား... Ask for More ပက်စီကြော်ငြာလေးပါ။ သံပရာရည် ညှစ်တာလေး မြင်လိုက်မိလို့ ဦးနှောက်ကို ထည့်ညှစ်ကြည့်လိုက်တာပါ။
နူးညံ့လွန်းပါတယ်။ ရိတ်ထားလို့ ချောမွတ်နေတဲ့ မျက်နှာကို ကလေးလေးက ဟိုဒင်း ယုံမှား သွားပုံရတယ်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား ကြော်ငြာလေးပါ။
Posted by WHITEROSE at 3:44 PM0comments
Posted by WHITEROSE at 3:47 PM0comments
ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ တွေ့လို့ မိတ်ဆွေများကို ဝေမျှလိုက်တာပါ။ မိန်းမတွေရဲ့သဘောကိုက သိမ်မွေ့တယ် နက်ရှိူင်းတယ် မှန်းရခက်ပါတယ်။ စိတ်ပြောင်းလဲများတယ်။
တရားသာရှူတတ်ရင် တစက္ကန့်တွင်း ပျက်သွားတာတွေများလှတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ တရားအလုပ်ကို မိန်းမတွေက ပိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖြစ်ကြလေသလား.......................။ မိန်းမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြန်တွေးကြည့်မိတာ။
"အမျိုးသမီးများ သုံးနေကျ စကား ၉ ခွန်း"
(2) Five Minutes: ငါးမိနစ်။ ။။ သူမ အပြင်ထွက်ဖို့ အဝတ်အစားလဲနေချိန်သုံးပါတယ်၊ ဒီလိုဆို သေချာပြီ ခင်ဗျား နာရီဝက်အနဲဆုံး စောင့်ရမယ် ဆိုတာပါဘဲ။ သင်ဘောလုံးပွဲကို စိတ်ဝင်တစားထိုင်ကြည့်ပြီး၊ အိမ်အလုပ်ကို လျစ်လျူရှုနေရင်တော့ သင့်အတွက် ငါးမိနစ်ဟာ ငါးမိနစ်ထက်လုံးဝ မပိုတော့ပါဘူး။
(3) Nothing: ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး၊ အရေးမကြီးပါဘူး။ ။။ ဒီစကားလုံးသုံးပြီဆိုရင် သတိထား၊ ပြီးတဲ့နောက် ကြီးမားတဲ့ တိုက်ခိုက်မှု့တခုရှိနေလို့ဘဲ။ သင့်အနေနဲ့ ခြေနဲ့ တင်ပါး တထပ်တည်းကျအောင် ပြေးနိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အဖြေတခုနဲ့ အဆုံးသပ်မှာ မဟုတ်လို့ဘဲ။
(4) Go Ahead : လုပ်လိုက်လေ။ ။။ ဒီလိုဆိုလို့ ခွင့်ပြုချက်ရပြီလို့ မထင်လိုက်လေနဲ့၊ လုပ်ရဲရင် လုပ်ကြည့်ဆိုတာမျိုးဘဲ။ မပြုမိအောင် ဂရုပြုပါ။
(5) Loud Sigh: သက်ပြင်းရှည်။ ။။ ဒီမှာ အဓိပ္ပါယ် အားလုံးပါသွားပါပြီ၊ မင်းကို လုံးဝနားမလည်နိုင်တော့ဘူး၊ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ဘူး၊ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးပါ၊ သက်ပြင်းရှည်လျားစွာ ချပြီဆိုရင်တော့၊ အသုံးမကျတဲ့ သူနဲ့ ဘာကြောင့် အချိန်ကုန်၊ လေကုန်ခံပြီး အငြင်းပွားနေပါလိမ့် ဆိုတဲ့ သဘောဘဲ၊(နံပါတ် ၃ ကိုပြန်လည် အမှတ်ယပါ)။
(6) That's Okay: ရပါတယ်၊ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ။။ အန္တရယ် အကြီးမားဆုံးသော စကားလုံးလေး တခုပါ၊ သင့်အမှားအတွက် ကြီးမားသော ပေးဆပ်မှု့တခုကို သင့်ထံမှ တောင်းဆိုတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသင့်ပြင်ထားလိုက်ပါတော့။
(9) Don't worry about it, I got it : “စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး၊ ရပါတယ် ကျမလုပ်လိုက်ပါ့မယ်”ဆိုတဲ့ သဘောကတော့ ရန်ပွဲမစခင်၊ စကားချိုသပ်ခြင်းပါဘဲ သင့်ကိုလုပ်ဖို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောထားပေမဲ့၊ သင့်ပျက်ကွက်မှု့ကို သည်းမခံနိုင်မှု့ကို ပြသတဲ့ သဘောပါဘဲ။ ဒီနောက်တော့ နံပါတ် ၃ကို ပြန်ရောက်တော့တာဘဲ။
Posted by WHITEROSE at 3:53 PM0comments
အမေ။ ။ဘုန်းဘုန်းဘုရား…..သားသမီးက တော်ရင် ထက်မြက်ရင် လိမ္မာရင် မိဘများမှာက သုဂတိဘုံ ရောက်တယ် ဆိုတာ လက်ခံနိုင်ပါသလားဘုရား။ ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ဘုရား။
အဖြေ။ ။ သားသမီးများ တော်တယ်ထက်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ စီးပွားရေးမှာ တော်ထက်တာကိုပြောတာလား၊ စီးပွားရေးမှာ တော်ထက်ရုံမျှနဲ့ သားသမီးချမ်းသာပြီးသူဌေးဖြစ်ရုံမျှနဲ့ မိဘတွေကိုသုဂတိဘုံရောက်အောင် အထောက်အပံ့မပေး နိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့တော်ထက်တဲ့ အကျင့်သီလပြည့်စုံတဲ့ သားသမီးတွေကြောင့် သုဂတိဘုံရောက်ကြရတဲ့ မိဘများလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့အတိုင်း သားသမီးများက မိဘများကို ကျေးဇူးတကယ်ဆပ်ချင်တယ်ဆိုရင် မိကိုလက်ျာ ဖကိုလက်ဝဲ ပုခုံးပေါ်ထမ်းပြီး နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကြာအောင် ပြုစုလုပ်ကျွေးပါသော်လည်း ကျေးဇူးဆပ်တယ်လို့ မခေါ်ပါဘူး။ အသက်ထင်ရှားရှိစဉ် ဒါနကုသိုလ်နဲ့တဲ့ မိဘများကို ဒါနကုသိုလ်ပြုတတ်အောင် ပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးပေး စွမ်းဆောင်ပေးမယ်၊ သီလမရှိတဲ့ မိဘများကို သီလစောင့်ထိန်းချင်စိတ် ရှိလာအောင်၊ သီလစောင့်ထိန်းနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးမယ်၊ ဘာဝနာတရားမပွားသေးတဲ့ မိဘများအား ဘာဝနာပွားချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် ပွားများနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးမယ် စွမ်းဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်၊ မိဘများကို ကျေးဇူးဆပ်ရာရောက်တယ်။ လို့ ဘုရားရှင်ဟောကြားထားပါတယ်။
ဘုရားရှင် ညွန်ကြားသလို ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ မရှိတဲ့ မိဘများအား ဒါန၊သီလ၊ ဘာဝနာတရားများ အားထုတ်ချင်စိတ်ပေါ်လာပြီး တကယ်လည်း ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားများနဲ့ အချိန်ကုန်ကာ သေလွန်သွားမယ်ဆိုပါရင် မိဘများဟာ သုဂတိဘုံသို့ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တော်တဲ့ထက်တဲ့ သားသမီးများ လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
သာမာန် စည်းစိမ်ချမ်းသာများ သဘောရှိသုံးဆောင်စေပြီး လိုလေသေးမရှိ ပြုစုရုံမျှနဲ့တော့ မိဘများ သုဂတိဘုံသို့ မရောက်နိုင်ပါ။ တော်တဲ့ထက်တဲ့ သားသမီးများလည်း ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ကြုံတုန်းပြောပါအုံးမယ်…….သားသမီးများ တော်တယ်ထက်တယ်ဆိုလို့…
လောကမှာ သားသမီး သုံး မျိုး ရှိပါတယ်။ (၁)အတိဇာတ၊ (၂) အနုဇာတ၊ (၃)အ၀ဇာတ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ မိဘများထက် သီလ၊ သမာဓိ၊ပညာ ပိုလွန်တဲ့ သားသမီးများကို “အတိဇာတ” လို့ခေါ်တယ်။ မိဘနဲ့ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ တန်းတူရှိတဲ့ သားသမီးများကို “အနုဇာတ” လို့ ခေါ်တယ်။ မိဘများထက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ယုတ်ညံ့တဲ့သူကိုတော့ “ အ၀ဇာတ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ ဘယ်အမျိုးအစားအထဲမှာ ပါ တယ်ဆိုတာ ခွဲခြားသိဖို့ပါ။
သားသမီးတော်ထက်တဲ့အတွက် ဖခင်ကြီး သုဂတိဘုံရောက်သွာရတဲ့အကြောင်းကို သဂြိုလ်ဘာသာဋီကာမှာ ဖတ်ရတဲ့အတိုင်း ဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါက သောဏဂိရိ ခေါ်တဲ့ တောင်ပေါ်ကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ရဟန်းတောတစ်ပါး သီတင်းသုံးတော်မူပါတယ်။ သူ့အမည်က အရှင်သောဏ၊ အာသဝေါကင်းကွာ ရဟန္တာတစ်ပါးဖြစ်တော်မူပါတယ်။ သူ့မှာ ဖခင်အိုကြီး ရဟန်းတစ်ပါးလည်း ရှိပါတယ်။ ဖခင် ရဟန်းကြီးဟာ လူ့ဘ၀တုန်းက မိသားစုအတွက် မုဆိုးအလုပ်နဲ့ အချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်ကြီးလို့ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီး သားတော်ရဟန်းထံမှာ ရဟန်းပြု ပြီးနေပါတယ်။
ဖခင်ရဟန်းကြီး သေခါနီးအချိန်ရောက်တဲ့အခါ တောင်ခြေက ခွေးနက်ကြီးတွေ လာကိုက်နေသယောင် နိမိတ်ထင်နေတဲ့အတွက် “ ဟဲ့..ချောက်ထုတ်ပါသားရဲ့” ဆိုပြီး ဆက်ကာ ဆက်ကာ အော်ဟစ်နေပါတယ်။ ဒီအသံကို သားရဟန်းကြားတော့ “ ဘာဖြစ်တာလဲ ဦးဇင်းကြီး” မေးတော့ “ခွေးကြီးတွေ……ခွေးကြီးတွေ” လို့ ဖခင်ရဟန်းကြီးက ပြန်ပြောပြပါတယ်။ “’ဒါဟာငရဲနိမိတ်တွေပဲ၊ ဒီအတိုင်းသေသွားလို့ကတော့ ငရဲရောက်မှာ သေချာနေပီ၊ ငါလို သားတစ်ယောက်လုံး ရှိနေပါလျှက်နဲ့ ဖခင်ရဟန်းကြီး ဘာ့ကြောင့် ငရဲကျရမှာလဲ” လို့ တွေးကာ ကိုရင်လေးတွေကို ပန်းခူးခိုင်းပြီး စေတီရင်ပြင်တော်မှာ ပန်းမွေ့ရာခင်းစေတော်မူပါတယ်။
ဖခင်ရဟန်းကြီးကိုတော့ ညောင်စောင်းနဲ့အတူ စေတီရင်ပြင်အရှေ့ကို ချထားစေပါတယ်။ အဲဒီအခါ သားရဟန်းက “ ဦးပဇင်းကြီးအတွက် ပန်းပူဇော်ပေးထားပါတယ်၊ ကြည်ညိုပါ” လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဖခင်ရဟန်းကြီးဟာ ကြည်ညိုဝမ်းမြောက်ဆဲ ခဏမှာ ခွေးနက်ကြီးတွေ မထင်တော့ဘဲ နတ်သမီးတွေ ထင်လာပါတယ်။ ဒီမှာ ဖခင်ရဟန်းကြီး ပြောလိုက်တာက….
“ဟဲ့….သား ဖယ်ပေးပါ………ဖယ်ပေးပါ….သားရဲ့ မိထွေးတွေ လာနေတယ်” လို့ ယောင်ယမ်းပြောဆိုနေစဉ် စုတိစိတ်ကျပြီး သေဆုံး သွားပါတယ်၊ သေလွန်တဲ့အခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရပါတယ်။ ဒါဟာ အတိဇာတ လို့ဆိုတဲ့ သားရဟန်းရဲ့ တော်မှုထက်မှုကြောင့် ဖခင်ရဟန်းကြီး ငရဲကျမဲ့ဆဲဆဲက သီသီလေးလွတ်ကာ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ခဲ့ရတဲ့ သာဓကတစ်ခုပါ။ ဒါလောက်ဆိုရင် မေးသူရော စာဖတ်နေသူများပါ သဘောပေါက်လောက်ပီထင်ပါရဲ့……….။
Posted by WHITEROSE at 7:33 PM0comments
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတင်းပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ဟာ လူမှုရေးအရ နှာခေါင်းရှုံ့ချင်စရာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဆေးပညာအရတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အကျိုးထူးတွေ ရစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မစ်ချီဂန်တက္ကသိုလ်က ပညာရှင်တွေဟာ အတင်းခြင်းဟာ မိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီးကျန်းမာစေသလို ပိုပြီးလည်း ပျော်ရွှင်စေတယ်လို့ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ သုတေသီတွေရဲ့ အပြောအရတော့ အတင်းပြောတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ progesteroneလို့ခေါ်တဲ့ ဟိုမုန်းတစ်မျိုး ပုံမှန်ထက် အများကြီးပိုပြီး ထွက်လာတတ်ပြီး အဲဒီဟိုမုန်းဟာ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ဝေဒနာကို သိသိသာသာ လျော့ပါးစေပါတယ်တဲ့။ မစ်ချီဂန်တက္ကသိုလ်က ပညာရှင်တွေဟာ ကျောင်းသူပေါင်း (၁၆၀)လောက်ကို အတွဲလိုက်သတ်မှတ်ပေးပြီး လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ အတင်းအဖျင်းပြောရင်း ဗဟုသုတ ဖလှယ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေက စကားနည်းပြီး အတင်းပြောရတာ ၀ါသနာမပါတဲ့ မိန်းကလေးတွေထက် ကျန်းမာရေးကောင်းသလို ပိုပြီးလည်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ပိုပြီးထူးခြားတဲ့အချက်က အတင်းပြောတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍမှာ ပိုပြီးတော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာပြီး လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ တွင်ကျယ်ဝင်ဆံ့လာပါတယ်တဲ့။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အဆိုအရတော့ မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမှာ တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ် ပြောနေကြရတာ မိနစ်(၂၀)လောက် ကြာရုံနဲ့တင် progesteroneပမာဏဟာ ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်မြင့်မားလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခပ်အေးအေးနဲ့ စကားသိပ်မပြောတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာတော့ progesteroneဟာ လုံးဝတက်မလာဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေက ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ပါမောက္ခ စတက်ဖနီဘရောင်းဟာ ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး သူက တွေ့ရှိချက်တွေကို Hormones and Behaviourဂျာနယ်မှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ “လူနှစ်ယောက် အတင်းပြောနေတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးယှက်နွယ်မှု ဟာ ပိုပြီးခိုင်ခံ့လာသလို progesteroneကလည်း ထိုးတက်လာပါတယ်။ ဒါဟာ ဇီဝကမ္မလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်အပေါ်မှာ အကောင်းလက္ခဏာဘက်က သက်ရောက်နိုင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဖြစ်စဉ် တစ်ခုပါ”လို့ ပါမောက္ခကြီးက ရှင်းပြပါတယ်။ progesteroneရဲ့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်လာစေတဲ့ oestrogenကိုတောင် လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အတွက် လူတိုင်း အတင်းများများ ပြောသင့်တယ်လို့ တောင် ပါမောက္ခကြီးက ကျီစယ်သွားပါသေးတယ်။
Posted by WHITEROSE at 3:57 PM0comments
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်စနစ်နဲ့ အညီ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေက နောက်က တစ်ပါတည်း လိုက်လာတက်တာလဲ လောကရဲ့ သဘာဝပေါ့။ အရာရာကို စမ်းသပ်စွန့်စားချင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တွေ.....
နည်းပညာမြင့် မီဒီယာတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးသိမ်းသွင်းမှုအောက်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရောက်လာနေပြီ။
လမ်းကြောင်းမှန်ကို ရောက်သွားတဲ့ ကလေးတွေ ရှိပေမယ့် ရေလိုက်လွဲတဲ့ ကလေးတွေ အများကြီးပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်နေ၊ ကြားနေရတာတွေလဲ လခြား၊ ရက်ခြားကနေ ခု နာရီလောက်ပဲ ခြားပါတော့တယ်။
အတုမြင် အတက်သင်ဆိုတာ ကလေးတွေအတွက် အများကြီး အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိဘရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်ကနေ လွတ်ပြီး အဆောင်နေ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ လူငယ်၊ လူရွယ်တွေမှာ ပိုလို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျောင်းသားအရွယ်၊ လူငယ်ဆိုတာ ပျော်ချင်တယ်၊ ပါးချင်တယ်၊ လွတ်လပ်ချင်တယ်.... ဒါ သဘာဝပဲ။ ဒါပေမယ့် အရာရာတိုင်းမှာ အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ လိုအပ်တာထက် ပိုလာရင်တော့ ဒါဟာ
ဂိမ်းဆော့တယ်ဆိုတာ ဦးဏှောက်ကို အလုပ်ပေးတာ၊ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရည်ကို မြှင့်ပေးတာ။
ဒါကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့ သူတွေကိုတောင် တစ်နေ့တစ်နာရီ ဂိမ်းဆော့ဖို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက အကြံပေးထားတာပေါ့။ ခုတော့ ကလေးတွေ ဂိမ်းဆော့တာက ပြဿနာတစ်ခုကို ဦးတည်နေပြီ။
အများစုသော ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းချိန်ပြင်ပတင် မကတော့ပဲ ကျောင်းချိန်မှာပါ ဂိမ်းဆိုင်မှာ ရောက်နေကြတယ်။ အတန်းမတက်ရုံတင်လားဆိုတော့ ထမင်းမေ့၊ ဟင်းမေ့ကို ညလုံးပေါက် ကစားတဲ့သူက များနေတယ်။ အတန်းပညာကို ထိခိုက်ရုံသာမက၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကိုပါ ထိပါးလာနေတယ်။
တစ်ချို့ဆေးကျောင်းသားတွေ၊ ကွန်ပျူတာကျောင်းသားတွေ၊ နည်းပညာကျောင်းသားတွေ..... ကျောင်းသားတွေဟာ ခုဆို ဂိမ်းကျောင်းသားလို့ ခေါ်ရမတက် ကျောင်းထက် ဂိမ်းဆိုင်မှာသာ အနေများနေကြတယ်လေ။
မီဒီယာရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုက သိပ်ကို ကောင်းလွန်းတာကိုး.........။
တကယ်တမ်း အသုံးချမယ်ဆိုရင် သုံးနာရီဟာ ဒေတာရှာပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
အိမ်ကျမှ အသေးစိပ် ပြန်ဖတ်ရတာဗျ။ ဒါပေမယ့်....... အင်း ဒါပေမယ့်ဆိုတာက မသုံးချင်ပေမယ့် အများဆုံးသုံးနေရတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ခက်တာက အများစုက အင်တာနက်ဆိုရင် ချက်မယ်ဆိုတာလောက်ပဲ သိကြတော့တယ်။ ဒီမှာလဲ အပြုသဘောထက် အပျက်သဘောကို လမ်းကြောင်းက စောင်းနေတယ်။ ဒါကိုလဲ ပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားကြပေမယ့် ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း မတွေ့ကြသေးဘူး။
မီဒီယာတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထဲမှာမှ......အဆိုးဆုံးကတော့.......အတူနေချစ်သူတွေ များလာတာပဲ။
ပေးထားတယ်။ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားတယ်။ မြန်မာမိသားစုတွေ အစဉ်အလာက ဖွင့်ပြောရတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားကြတာ။ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ ပြောအပ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆထားကြတာ။ ဒီတော့..........ကလေးတွေမှာ လုံလောက်တဲ့ အသိညဏ် မရှိဘူး။ ပြည့်ပြည့်၀၀
သို့သော်.... စူးစမ်းချင်တဲ့ အရွယ်မှာ မီဒီယာတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုနဲ့.... ကလေးအချို့ လမ်းကြောင်းမှားကြတယ်။ “မှားတော့ ဘာဖြစ်လဲ... ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပေါ့... ခင်ဗျားအပူမပါပါဘူးလို့” တော့ အပြောခံရဖူးတယ်။
ဟုတ်ပါပြီ....ဒါပေမယ့် (သုံးရပြန်ပြီဗျာ)..... ကိုယ်ဖြစ်တာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ခံရတာမှ မဟုတ်ပဲလေ...။
လိုအပ်တဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အသိညဏ် မရှိပဲ.. ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်လုပ်ကြတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာက ရှိလာပြီ။ ကဲ ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းကြသလဲ.........။
အတူနေတုန်းကတော့ ဘာမှမစဉ်းစားမိဘူး။ သူကလဲ ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်၊ ကိုယ်ကလဲ သူ့ကို ချစ်တယ်။ ဒါဆို ပြီးပြီပေါ့. လို့ ခပ်တိမ်တိမ် တွေးတဲ့သူကလဲ မနည်းဘူးလေ။ ဒါဆို အချိန်တန်လို့ လက်ထပ်ယူမယ်ဆိုတော့..... သူ မပြည့်စုံ။ ကိုယ်မပြည့်စုံ။ ပညာက တစ်ပိုင်းတစ်စ၊ အသက်က မပြည့်။
အဲဒီမှာ unwanted baby ဆိုတာ ဖြစ်လာရော......။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဖြေရှင်းကြတယ်။ ယဉ်မင်းဦး (ဆေးတက္ကသိုလ်) ရဲ့ အက်တိုးပစ် အပျိုစင် ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ
ရေးထားတာတွေက....တကယ့်အပြင်လောကမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာလေးတွေပါ။ အခန့်မသင့်ရင် အသက်ကိုပါ
သို့သော်..... အဲဒီသို့သော်က တော်တော်လေး ကြီးမားပါသည်။ မထွေးနိုင်၊ မမျိုနိုင်ဘ၀တွေမှာ......တန်ဆာခံခဲ့ရတဲ့ အန်စာတုံးလေးတွေများစွာ ရှိလာရသည်။
ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းရသလိုပါပဲ....မိန်းကလေးတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ချင်တယ်။
ရှေးတုန်းကလို သုံးနှစ်သုံးမိုးစောင့်ပြီး ၊ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး ရှိမှ လက်ထပ်ဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။
ခေတ်အရ မြင်မြင်ချင်းလဲ ချစ်နိုင်ပါသည်။ မမြင်လဲပဲ ချစ်နိုင်ပါသည်။ အသံလေးနဲ့လဲ ချစ်လို့ ရပါသည်။
အသည်းပေါက်မတက် ချစ်တယ်ပြောပြော၊ အသက်ထက် ချစ်တယ်ပြောပြော.....ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဖြစ်စေ. ချစ်လို့ ရပါသည်။ သို့ပေသိ(ဒါပေမယ့် မသုံးချင်တော့လို့ဗျ).........လက်မထပ်ခင်အချိန်ထိတော့............
မိန်းကလေးများ ကိုယ့်ကိုကိုယ့် စောင့်ရှောက်စေချင်ပါသည်.........တန်ဖိုးထားစေချင်ပါသည်........
(ကိုယ်ကိုတိုင်က တော်လွန်း၊ တက်လွန်း၊ သိလွန်း၍ ပြောနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကြုံခဲ့၊ ကြားခဲ့၊ မြင်ခဲ့ရသမျှကို တက်နိုင်သလောက် လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လဲ perfect ဖြစ်သူ မဟုတ်ပါ။ ကြိုးစားဆဲ အဆင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်တွေမို့ ကြိုက်သလို သဘောထား ကွဲလွဲခွင့်ရှိပါသည်။
စိတ်ကြိုက် ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါသည်။ အဆင်ပြေသလို ဆင်ခြေပေးခွင့်ရှိပါသည်။ အပြုသဘောကိုဆောင်၍ ဒီပို့စ်လေးအား တင်ခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့်....မိမိကိုယ်ကို လိပ်ပြာသန့်ပါသည်။ တက်နိုင်သမျှ လက်ဆင့်ကမ်း ပြောပေးဖို့လဲ တိုက်တွန်းပါသည်။ မည်သို့ မှတ်ချက်မျိုးမှ မပေးသည့်တိုင်အောင် ဆုံးအောင်အထိ
Posted by WHITEROSE at 4:00 PM0comments
အဆင်ပြေရင်ပြေသလို လိုက်နာကြည့်ကြပါဦးနော်။ တစ်ခုမဟုတ်တခုတော့ အကျိုးရှိကြမှာပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေပြေကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ စိတ်ချမ်းသာကြစေချင်ပါတယ်။
5. တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂ ကျင့်ခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
6. ကစားခုန် ကစားလည်း များများ ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (အားကစားမဆန်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကစားခြင်း)
7. သင် ယခင်နှစ်မှာ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်အရေအတွက်ထက် ဒီနှစ်မှာ များများပိုဖတ်ပါ။
9. တစ်ရက်မှာ7နာရီလောက်တော့ အနည်းဆုံး အိပ်သင့်ပါတယ်။
10. တစ်ရက်မှာ 10 မိနစ်ကနေ နာရီဝက်လောက်ထိ လမ်းလျှောက်သင့်ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်နေစဉ်မှာလည်း မျက်နှာလေးကို ခပ်ပြုံးပြုံးလေး နေပေးရမယ်နော။
11. ကိုယ့်ဘ၀ကို သူများတွေနဲ့ မယှဉ်ပါနဲ့။ သူတို့ ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းကို လျှောက်လမ်းနေတယ်ဆိုတာ သင် မသိနိုင်ဘူးလေ။
12. ကိုယ်မထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေပေါ်မှာ မကောင်းမြင်စိတ်တွေ မထားပါနဲ့။ အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်း စိတ်ဆင်းရဲ မနေပါနဲ့။ လက်ရှိ ကိုယ့်မှာရှိနေတာလေးကို တန်ဘိုးထားပြီး ဒါတွေကိုပဲ ပိုကောင်းအောင်
13. အလုပ်တွေကိုလည်း အလွန် အကျွံမလုပ်ပါနဲ့.. အတိုင်းအတာလေးနဲ့ လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။
16. အိပ်နေစဉ်မှာထက် နိုးနေချိန်တွေမှာ အိပ်မက် ပိုမက်ပေးပါ။
17. မနာလို ၀န်တိုဖြစ်နေတာဟာ အချိန်ဖြုန်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ သင့်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တာတွေ အားလုံးရှိနေပါတယ်။
18. အတိတ်က ပြသနာတွေကို မေ့လိုက်ပါ့တော့။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်၊ ကြင်ဖော်တွေမှာ အတိတ်က အရိပ်ဟောင်းတွေ ရှိနေရင်လည်း ပြန်မဖော်ပါနဲ့တော့။ ဒါတွေက လက်ရှိဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်။
19. ဘ၀ဟာ သိပ်တိုတောင်းပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို မုန်းဖို့ ဆိုတဲ့ အချိန်တောင် ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခြားလူတွေကို မမုန်းပါနဲ့။
21. ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့ သခင်ဟာ ကိုယ်မှလွဲလို့ နောက်တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
22. ဘ၀ဆိုတာ ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်က အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာ ပညာသင်ရမယ့် ကျောင်းသားလေးပေါ့။ ပြဿနာဆိုတာက သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမျှသာ ဖြစ်တယ်။ အက္ခရာ သင်္ချာတွေကို တွက်ချက်သလို ဖြေရှင်းနိုင်သွားမှာပါ။ အဲ့ဒါတွေရဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အတွက် အရေးပါနေမှာပေါ့။
24. အငြင်းအခုံတွေတိုင်းမှာ သင်ချည်းပဲ အနိုင်ရနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ သင်သဘောမတူလိုတာတွေကို သဘောတူအောင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါလား။
25. သင့်မိသားစုနဲ့ မကြာခဏ ဖုန်းပြောပါ။ အဝေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ တူတူနေတယ်ဆိုရင်တော့ နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးလေးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပါ။
26. အများသူငှာတွေအတွက် ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့စဉ်ပြုကြည့်ပါ။
27. လူတိုင်းကို အရာအားလုံးအတွက် ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
28. အသက် (၇ဝ)ကျော် ဘိုးဘိုး ဘွားဘွားတွေ၊ အသက် (၆)နှစ် အောက် ကလေးတွေနဲ့ အချိန်များများ ပိုဖြုန်းပါ။
29. တစ်နေ့မှာ လူသုံးယောက်လောက်ကို ကိုယ့်ကြောင့် ပြုံး ရီ သွားအောင် ကြိုးစားကြည့်ပါလား။
30. တစ်ခြား သူတွေ သင့်ကို ဘာပဲ ထင်ထင်။ ဒါသင့်အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။
31. သင့်ရဲ့ အလုပ်က သင်နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ သင့်ကို လာပြုစုမှာမဟုတ်ဘူး။ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကသာ သင့်အနားမှာ ရှိနေကြလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေနဲ့ များများ ထိတွေ့နေဖို့ လိုအပ်တယ်။
33. အသုံးမဝင်တဲ့၊ နှစ်လိုဖွယ်မရှိတဲ့၊ ကြည်နူးဖွယ် မကောင်းတဲ့ အရာမှန်သမျှကို သင့်စိတ်ထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
34. တရားကို လုပ်ရင် တရားက ပြန်စောင့်ရှောက်ပါတယ်။
35. ကောင်းတာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ၊ ဆိုးတာပဲ ဖြစ်နေ ဖြစ်နေ မမြဲပါဘူး။ အမြဲပြောင်းလဲနေမှာ ပါပဲ။ မမြဲတဲ့ အကြောင်းက မြဲတာနော်။
36. ကိုယ်ဘာတွေပဲ ခံစားနေရ နေရ၊ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ကဲ… လာ သွားစို့..
အလှပြင်လိုက်၊ ရှိုးထုတ်လိုက်။ ပျော်ပျော်နေရမှာပေါ့။
37. အကောင်းဆုံးတွေဆိုတာ ဖြစ်လာအုံးမှာပါ။ အဆိုးတွေ ပြီးရင်လေ...
38. နံနက်တိုင်းမှာ အသက်ရှင် အန္တရာယ်ကင်းပြီး နိုးထလာတာတိုင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံး အချက် (၄ဝ) မြောက်လာပါပြီ။ နောက်ဆုံးမှထားလို့ အရေးမကြီးတာ
40. ဒီအီးမေလ်းကို သင် ဂရုတစ်စိုက်ရှိတဲ့ လူ အယောက် (၄ဝ)ဆီကို Forward
အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့forward လုပ်ပေးလိုက်တာပါ ဖတ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ဆောရီးပါနော်။
မူရင်းforward အီးမေးလေးကို ဆီလျော်သလို ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ်။
Posted by WHITEROSE at 2:24 PM0comments
Gmail မှ ရသော ဟာသများကို စုစည်းထားပါတယ်။
ဒီလို မလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ့်လူ
စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာသော လူနာက....
“ ဆရာ..ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးမှာ မိချောင်းငယ်လေးတွေ အများကြီး ကပ်နေတယ် ” ဟု ပြောပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ မိကျောင်းငယ်လေးများကို ခွာချဟန်ပြုသည်။
ထိုအခါ ဆရာဝန်မှ အလန့်တကြားနှင့် အော်သည်....
“ ဟေ့လူ ...ဟေ့လူ ခင်ဗျား ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျာ၊ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့ဘက် ခွာချနေရတာလဲ၊
တော်သေးတာပေါ့ဗျာ..ကံကောင်းလို့ ကျွန်တော့်ပေါ်မရောက်တယ် ”
.............. .............. ................. ............
“ဒီလိုပါခင်ဗျာ ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့က ခြံထဲမှာ ငရုပ်နဲ့ ခရမ်းချဉ်ပင်
စိုက်ထားတာ တော်တော်လေး အေင်မြင်ပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်ခင်ဗျ၊ အခုကျွန်တော့်အ်ိမ်ဘေးမှာမီးလောင်နေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မီးလာသတ်ရင်
ကျွန်တော့်စိုက်ခင်းက အပင်တွေကို နင်းမိမှာစိုးလို့ပါ” မဆုတ်သာ မတိုးသာ အခြေအနေ
အလုပ်ရှင်က အတွင်းရေးမှူးမကို ပြောသည်။ ငါ့တို့ နိုင်ငံ့ခြားကိုတစ်ပတ်ကြာ သွားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်ထား။ အတွင်းရေးမှူးမက သူ့ယောင်္ကျားထံ ဖုန်းဆက်၏။ ကျွန်မသူဌေးနဲ့ ကျွန်မနိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်ကြာ သွားရလိမ့်မယ် ။ ရှင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြည့်နေနော် ယောက်ျားက
သူ့တိတ်တိတ်ပုန်း ချစ်သူထံဖုန်းခေါ်သည်။ ကိုယ့်မိန်းမ နိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ် ကြာသွားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့ တစ်ပတ်လုံး အတူနေကြရအောင်။ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူက သူမ သီးသန့် ကျူရှင်ပေးနေသော ကောင်လေးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ငါ တစ်ပတ်လောက် အလုပ်လုပ်စရာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းစာလာသင်စရာ မလိုဘူး ကောင်လေးက သူ့အဘိုးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ဘိုးဘိုး၊
ကျွန်တော့်ဆရာမ အလုပ်များနေလို့ တစ်ပတ်လောက် စာမသင်ရဘူး။ ကျွန်တော်တို့
တစ်ပတ်လုံးနေပြီး အချိန်ဖြုန်းရအောင်။ အဘိုး(အလုပ်ရှင်သူဌေး)က သူ့အတွင်းရေးမှူးကို ဖုန်းဆက်သည်။ ဒီအပတ်ငါမြေးနဲ့အချိန်ဖြုန်းရမယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကိုမတက်နိုင်တော့ဘူး။ အတွင်းရေမှူးက သူ့ယောင်္ကျားကို ဖုန်းခေါ်သည်။ ကျွန်မအလုပ်ရှင်က ဒီတစ်ပတ်ထဲ လုပ်စရာလေးတွေ ရှိတယ်။
ခရီးစဉ်ကို ဖြက်လိုက်တယ်။ ယောင်္ကျားကသူ့ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ငါတို့ ဒီတစ်ပတ် အတူတူအချိန် မဖြုန်းနိုင်တော့ဘူး။ ငါ့မိန်းမ ခရီးစဉ် ဖျက်လိုက်တယ်။ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူက
ကျူရှင်သင်ပေးနေသည့် ကောင်လေးထံ ဖုန်းခေါ်သည်။ ဒီတစ်ပတ် ငါတို့ ပုံမှန်အတိုင်း စာသင်ဖို့ရှိတယ်။ ကောင်လေးက သူ့အဘိုးထံဖုန်းဆက်သည်။ ဘိုးဘိုး ကျွန်တော့်ဆရာမက ပြောတယ်။ ကျူရှင်တက်ရမယ်တဲ့ အဘိုးနဲ့ အဖော်မလူပ်ပေးနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အဘိုး (အလုပ်ရှင်)က သူ့အတွင်းရေးမှူးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကို ဒီတစ်ပတ် ဒို့တက်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်ထားလိုက်။ အဲဒါကို မဆုတ်သာမတိုးသာ အခြေအနေဟု ခေါ်သည်။
တစ်နေ့မှာ... လူတစ်ယောက်ဟာ. သူ့သူငယ်ချင်းကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့..
သူ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြနေတယ်တဲ့....ငါ ကျောင်းဆရာမကို.. လက်ထက်ခဲ့မိတာ... မှားသွားပြီကွာ.. တဲ့..ဘာလို့လဲ တဲ့.. သူ့သူငယ်ချင်းက.. မေးတယ်... တဲ့..အေးကွာ... ဟိုနေ့က ငါအိမ်ပြန်နောက်ကျတော့..
အိမ်ထဲကိုအ၀င်မခံဘဲ.. ဗလာစာအုပ်တစ်အုပ်ချပေးတယ်ကွာ.. နောက်တစ်ခါ.. အိမ်ကို အချိန်မှန် ပြန်လာပါ့မယ်... နောက်မကျစေရပါဘူး.. လို့.. အကြောင်း တစ်ရာ ရေးခိုင်းတယ်ကွာ... တဲ့...
အိမ်ရှင်၏သမီးသည် စန္ဒရားကို တီးနေသည်။
၎င်းအနားသို့ ဧည့်သည်ဖြစ်သူ နာမည်ကြီးစန္ဒရားဆရာ ကပ်လာပြီး မေးသည်။
"ဘာဖြစ်လို့ ခြေနင်းကို အသုံးမပြုတာလဲ"
"ဘရိတ်အုပ်ရလောက်အောင်အထိ ကျမ မြန်မြန် မတီးတတ်သေးလို့ပါ"
အထူးစည်းကမ်းတင်းကြပ်သည်ဟု နာမည်ကြီးသော လန်ဒန်မြို့ရှိ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားကျောင်း တစ်ခုသို့ တွမ်.. ဆိုသူကျောင်းသားအသစ်တစ်ယောက်ရောက်ရှိလာသည်။ ဤကျောင်းသည် စည်းကမ်းကြီး လှကြောင်း မိဘများသို့ စာရေးလျှင် မလိုအပ်သည်များကို မရေးသင့်ကြောင်း ကျောင်းသားကြီးများက တွမ် ကိုသတိပေးသည်။ အချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင် တွမ်.. ထံမှ ပထမဆုံးစာကို တွမ်၏ မိဘများ လက်ခံရရှိကြသည်။ စာမှာတိုတိုလေးဖြစ်သည်။
"ဖေဖေ.. မေမေတို့ခင်ဗျား... ကျွန်တော်တို့၏ ကျောင်းတွင် ကျောင်းသားပေါင်း (၃၈၇) ယောက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားဦးရေ ၃၈၆ ယောက်သာဖြစ်စေလိုသော ဆန္ဒ ကျွန်တော့တွင် ပြင်းပြလျက်ရှိပါသည်"
လူစီးရထားတွဲပေတွင် ဖြစ်သည်။ ရထားတွဲတစ်ခုလုံး ခရီးသည်များ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများဖြင့် ခြေချစရာ နေရာလွတ်မရှိအောင် ပြွတ်သိပ်နေသည်။ လက်မှတ်စစ်က လက်မှတ်များကို လိုက်လံစစ်ဆေးသည်။ ပစ္စည်းပုံးများကြားတွင် ပုန်းနေသော အသက် (၅ဝ)အရွယ်ခန့် ပိန်ပိန်သေးသေး လူကြီးတစ်ဦးကို တွေ့ရသည်။ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့် လူကြီးကပြောသည်။ "ဦးဟာ.. မရှိဆင်းရဲသားပါ... မောင်ရင်ရယ်... လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိပါဘူး.. တစ်ဖက်ရွာမှာ ဦးရဲ့သမီး
ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်မယ်.. အဲဒီကိုသွားချင်လို့ ဒီနေ့မရောက်ရင်မဖြစ်လို့ပါ...
ဘယ်သူ့ကိုမှ အနှောက်အယှက် မဖြစ်ရအောင် ဦး ငြိမ်ငြိမ်လေး နေပါ့မယ်.."
လက်မှတ်စစ်သည်. သဘောကောင်းပုံရသည်.. ထို့ကြောင့် ဘာမှမပြောဘဲ
ကျန်ခရီးသည်တို့၏ လက်မှတ်များကို ဆက်စစ်သည်။ ထောင့်တစ်နေရာတွင်..
ကုပ်ကုပ်ကလေးထိုင်နေသော အရပ်ပုပု ပိန်ပိန် လူငယ်တစ်ယောက်ကို တွေ့ရသည်။
လက်မှတ်စစ်က ၎င်းအနားရောက်သောအခါ လူငယ်၏ မျက်နှာသည် ကြောက်စိတ်ဖြင့်
ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်သွားသည်။ ၎င်းတွင်လည်း လက်မှတ်မရှိချေ.... "ခင်ဗျားဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ"
"ကျွန်တော်က သတို့သားပါ" ဟု လူငယ်က တိုးတိုးလေး.. ပြောသည်။...
နာမည်ကြီး စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ တစ်ခုက အလွန်အင်မတန်မှကို ရက်စက်သော လူသတ်သမားတစ်ယောက်ကို အလိုရှိနေတဲ့အတွက် လူရွေးချယ်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးဆန်ခါတင် အနေနဲ့ ယောင်္ကျား (၂)ယောက်နဲ့ မိန်းမ (၁)ယောက်ကိုရွေးချယ်လို့ရကြတာပေါ့လေ။ အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး စမ်းသပ်မှု အနေနဲ့ သူတို့ (၃)ယောက်ကို စစ်ဆေးကြတာပေါ့။ ပထမဆုံးယောင်္ကျားကို ဗလာကျည်ဆန်တွေ ပါတဲ့ သေနတ် တစ်လက်ပေးပြီး တစ်ဖက်အခန်းမှာ ရှိတဲ့ သူ့မိန်းမကို သွားသတ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီ လူက ခါးခါးသီးသီးကို ငြင်းပါတယ် .. သူ့မိန်းမကို သူ မသတ်ရက်ပါဘူးတဲ့ ...။
ဒုတိယ တစ်ယောက်ကလဲ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်မိန်းမတော့ ကိုယ် မသတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲ ငြင်းပါတယ် ..။
အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံး အမျိုးသမီး အလှည့်ရောက်လာတာပေါ့ အမျိုးသမီးကိုပြောတယ် .. ဒီသေနတ်ကို ယူသွားပြီး ခင်ဗျား ယောင်္ကျားကို ပစ်သတ်လာခဲ့ပါပေါ့ .. အမျိုးသမီးက အခန်းထဲ ၀င်သွားတယ်
အခန်းထဲက ဆူဆူညံညံ အသံတွေ ကြားရပြီး အမျိုးသမီးက မောမောပန်းပန်းနဲပ ပြန်ထွက်လာတယ်
အပြင်က အရာရှိတွေကို စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပြောလိုက်တယ် ရှင်တို့က ဗလာကျည်ဆန်တွေ ဘာလို့ထည့်ထားတာလဲ .. အမလေး မနဲကို ရိုက်သတ်ခဲ့ရတယ်
"အခုခင်ဗျားပြတဲ့ အိမ်ကိုတော့ ကြိုက်ပြီ..၊ ဒါနဲ့ ဒီရပ်ကွက်က..
"အင်မတန်တိတ်ဆိတ်တာပေ့ါ.. ဒီနှစ်ထဲမှာ အိမ်ငါအိမ် အနုကြမ်းစီးခံရတယ်..
လမ်းသွားလမ်းလာ သုံးယောက် အသတ်ခံရတယ်.. ဘယ်သူမှ ဘာအသံမှ မကြားဘူး.."
အိပ်ခန်းထဲတွင်ဖြစ်သည်။ အိပ်ပျော်စပြုရင်း.. မိန်းမ၏မျက်နှာတွင်
"မနက်ဖြန် ငါတို့လက်ထက်တဲ့ ၁၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ပဲ.. မနက်ကျရင်
ယောက်ျားဆီက လက်ဆောင်တစ်ခုခု ရတော့မှာပဲ.." ဟုတွေးသည်။
ဘေးတွေလှဲနေသော ယောက်ျားကလည်း သူ့အတွေးနှင့်သူဖြစ်သည်။
"လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကသာ ဒီမိန်းမကို ငါလည်ပင်းညှစ်သတ်ခဲ့ရင် မနက်ဖြန်ဆို လွတ်ပြီ။"
ကလေးက တော်တော်နဲ့ မအိပ်နိုင်သည်နှင့် မိန်းမက ယောက်ျားကို ပြောသည်။
"ကျွန်မ သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက် ဆိုပြလိုက်မှထင်တယ်.."
"မင်းကလဲကွာ၊ ချက်ချင်းကြီး ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့.. ပထမ သူ့ကို ချော့ကြည့်ပါဦး.."
မိန်းမလုပ်သူက ယောင်္ကျားရဲ့ပါးကို ဖြန်းကခဲ ပိတ်ရိုက်လိုက်တယ်..။
ယောင်္ကျားက ဘာလို့ရိုက်တာလဲလို့ ဒေါသနဲ့ ပြန်မေးတယ် ..
ရှင့်အကျီင်္အိတ်ကပ်ထဲမှာ ကေသီ ဆိုတဲ့ မိန်းမနာမည်ကိုတွေ့လို့ လို့
ဟာ.. ဒါ ငါလောင်းထားတဲ့ မြင်းမ နာမည်ကွ လို့ ယောင်္ကျားလုပ်သူက မိန်းမ ကို
မိန်းမက ယောင်္ကျားကို ပါးရိုက်ပြန်တယ်.. ။
ဘာလို့ရိုက်တာလဲလို့ မေးတော့ ..
ညက ရှင့် မြင်းက ဖုန်းဆက်လို့ တဲ့
ချာတိတ်လေးက ချာတိတ်မလေးကို ပြောသည်။
နင်နဲ့ငါနဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံလုပ်တမ်း ကစားကြရအောင်...
ကောင်းသားပဲ.. ဘယ်လို ကစားကြမလဲ
ငါက မျောက်လုပ်မယ်... နင်က ငါ စားဖို့ ငှက်ပျော်သီး ယူလာခဲ့...
အပိုင်းပိုင်း ခုတ်ဖြတ်ထားသော သေသူ၏အလောင်းကို ဂုန်နီအိတ်ထဲတွင်
ထည့်ချုပ်ထားသည်။ ဤအချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေသည့်
နေရာတကာ စွာကျယ်ကျယ် ၀င်လုပ်နေသည့် ယောက္ခမကို ကိုဘမောင်
သည်းမခံနိုင်တော့သဖြင့် တစ်နေ့တွင် ယောက္ခမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖကို ဆွဲကိုင်ကာ
တိုက်ခန်းပြတင်းပေါက်၏ အပြင်ဘက်သို့ ထုတ်လိုက်သည်။
ခေါင်းအောက်စိုက် ဖြစ်နေသော ယောက္ခမနှင့် ကိုဘမောင်
တစ်အိမ်ကျော်က ကိုမြ သူ့ယောက္ခမကို ဘာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာသိလား..
ယောက္ခမကို ကိုမြ ပုဆိန်နဲ့ ခုတ်သတ်လိုက်တယ်ဗျ.. အောက်ထပ်က ကိုအောင်မြ
သူ့ယောက္ခမကို ရေနစ်သတ်ပစ်လိုက်တယ်.. အဲကျွန်တော်ကတော့
စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူ.. ဒါကြောင့် အန်တီ့ကို ကျွန်တော် လွှတ်ပေးလိုက်မယ်..
မေး - မိန်းမတွေက ယောင်္ကျားတွေထက် ဘာလို့ အသက်ပိုရှည်တာလဲ ။
ဖြေ - သူတို့က မိန်းမမှ မရဘူးတာ ။
" အမေ..နတ်မိမယ် ဆိုတာ ဘာလဲဟင်.." " နတ်မိမယ်..ဆိုတာ..လူနဲ့တူတဲ့
အမျိုးပေါ့ ။ဒါပေမဲ့ သူကကောင်းကင်ပေါ် ပျံတတ်တယ်ကွဲ့ " " မ မှန် ဘူး " "
ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ " " မနေ့က ဘေးအိမ်က အန်တီကို အဖေက တင်ပါးဆုံကို
လက်နဲ့ပုတ်ပြီး မင်းဟာ နတ်မိမယ် လို့ပြောတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူက
"ဟဲလို ရဲစခန်းက ပါလားခင်ဗျာ .. ကျွန်တော့်အိမ်နီးချင်း အကြောင်းကို
ထင်းစင်ရှိရာသို့ သွားကာ ထင်းစများကို တစ်စချင်းကို ပေါက်ဆိန်ဖြင့် ခွဲကာ
"အေး .. ကောင်းတယ် .. အဲ့ဒါဆိုရင် မင်းအလှည့် .. ရဲတွေ ဆီကို
ဖုန်းခေါ်လိုက်.. ငါ့အိမ်က ဥယျာဉ် မြေဆွဖို့ လိုနေတယ်".......
လင်မယားနှစ်ယောက်တွင် သားလေးယောက်ရှိသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ
အကြီးသုံးယောက်မှာ ဆံပင်နီနီ၊ အသားလတ်လတ်၊ အရပ်မြင့်မြင့်ဖြစ်သည်။
အငယ်ဆုံးမှာ ဆံပင်နက်နက်နှင့် အရပ် ပုပုဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူသည်
နောက်ဆုံးတွင် မကျန်းမမာဖြစ်ပြီး သေလုဆဲဆဲတွင် ဇနီးဖြစ်သူကို သေချာ
-အချစ်ရယ် ကိုယ်မသေခင် ကိုယ့်ကို ရိုးရိုးသားသား ပြောစမ်းပါ။ အငယ်ဆုံး
သားလေးက ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးဆိုတာ။
- ဘုရားအဆူဆူကို ကျိန်ပြီး ပြောရဲပါတယ်။ ရှင့်သားမှ ရှင့်သား အစစ်ပါ။
ဟု ဇနီးဖြစ်သူက ပြန်ပြောလိုက်သည်။
ထိုစကားကို ကြားပြီးသည်နှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ပြုံးလျှက်
ကွယ်လွန်သွားသည်။ ထိုအခါ ဇနီးဖြစ်သူက ရေရွတ်ပြောဆို လိုက်သည်။
- တော်သေးတာပေါ့ ... တခြား သုံးယောက်ကို မေးမသွားလို့......
ဆိုင်ထဲသို့ ယုန်ဝင်လာပြီး ဈေးရောင်းသူကိုမေးသည်။
"ခင်ဗျားတို့ဆိုင်မှာ ငုန်တာဥ ရှိလားဟင်.."
"တစ်အချက် - ငုန်တာဥမဟုတ်ဘူး.. မုန်လာဥ
နှစ်အချက် - နောက်တစ်ခါ ငုန်တာဥလို့ လာပြောရင် မင်းကို ဟောဟိုကနံရံမှာ
သံနဲ့ ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် နားလည်လား.. သွား..."
ရက်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ စောစောကဆိုင်သို့ ယုန်ပြန်ရောက်လာပြန်သည်။
"ခင်ဗျားတို့ဆိုင်မှာ သံ ရှိလားဟင်.."
"အဲဒါဆို ငုန်တာဥကော ရှိလား.."
ခွေးမှလွဲ၍ အိမ်ထဲတွင် မည်သူမှ မရှိချေ။
တယ်လီဖုန်းကို ခွေး ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။
"သေသေချာချာနားထောင်၊ ၀ တစ်ချောင်းငင် တသတ် ၀ုတ်.. ၀ုတ်.. ၀ုတ်..."
၁၇-ရာစု အင်္ဂလန်နိုင်ငံ။ လေးမြားပစ်ပြိုင်ပွဲတွင်ဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံး အပျံစားကုတ်အင်္ကျီ အပျံစားဘောင်းဘီဝတ်ထားသော လူချောတစ်ယောက်
ထွက်လာပြီး ပစ်သည်။ မြားသည် ဘုရင့်အပါးတော်မြဲ၏ ခေါင်းထိပ်တွင် တင်ထားသော
ပရိသတ်များ တစ်ခဲနက် သြဘာပေးကြသည်။ လူချောကပြောသည်။
"I am Robin Hood"
ပရိသတ်၏အော်ဟစ်သံများ ဆူညံသွားသည်။ နောက်လူငယ်တစ်ယောက်ထွက်လာသည်။
သားရေဂျာကင်၊ သားရေဘောင်းဘီရှည်ကို ၀တ်ထားသည်။ ၎င်းက ပန်းသီးကိုချိန်ပြီး
မြားကိုလွှတ်လိုက်သည်။ ပန်းသီးထက်ခြမ်းကွဲသွားသည်။ ပရိသတ်များ
သောင်းသောင်းဖြဖြ အားပေးကြသည်။ လူငယ်ကပြောသည်။
"I am Willghelm Telle"
ဗလကောင်းကောင်း အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက် ထွက်လာသည်။ ကျပ်တင်းနေသော
ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီတိုကို ၀တ်ထားသည်။ ကြီးမားလှသော လေးကို
ယူလိုက်ပြီး ချွန်ထက်သည့် စို့ချောင်းဖြစ်ပစ်စည်။ စို့ချောင်းသည်
ဘုရင့်အပါးတော်မြဲ၏ ခေါင်းကို ဖြတ်ဖောက်ထွက်သွားသည်။
ပရိသတ်အားလုံးတုန်လှုပ် ခြောက်ခြားသွားကြသည်။ အတန်ကြာဘာအသံမှ မကြားရဘဲ
နောက်နှစ်ရက်လွန်ပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့ မှာတော့ လေယာဉ်မှူးကလဲမှာထားတဲ
အဲဒီအချိန်မှာမုဆိုးတစ်ယောက်က။ ။ ဟဟ..ကျနော်တို့ မနှစ်ကလဲဒီလိုလေယာဉ်နဲ
့ကျနော်လဲသယ်ပေးပါမယ့် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်...
တယ်ဗျို့ ....အဲဒီအချိန်မှာပဲ လေယာဉ်အပျက်အဆီးတွေကြားကနေမုဆိုးတစ်ယောက်က
ထွက်လာပြီး ။ ။ဟေ့ ...သူငယ်ချင်းရေ....ငါတို
့မေးလိုက်ပါတယ်...အဲတော့ ကျန်တဲ့မုဆို့း တစ်ယောက်က။ ။
ဟ...သူငယ်ချင်းရ...ငါတို့ မနှစ်ကပျက်ကျတဲ့ နေရာနဲ့ 
မိုင်ဝက်လောက်ပဲဝေးတယ်ဟ....လို့ ပြောလိုက်တယ်တဲ့ ဗျို့ ......
တစ်ခါကမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ခေါင်ရည်သောက်ရင်း ဆေးလိပ်ဖွာချင်လာတာကြောင့် ဆေးလိပ်မှာပါတယ်။ဆိုင်ကဆေးလိပ်လာချပါတယ်။
" အစ်ကို မီးခြစ်ပါလားခင်ဗျ"ဆိုတော့ ဘေးဝိုင်းကသူကမီးခြစ်ထုတ်ပေးရင်း
"အဘွား.. အဘွားရဲ့ မျက်လုံးတွေ ဘာဖြစ်လို့ အကြီးကြီး ဖြစ်နေရတာလဲဟင်. "
"အဘွားရဲ့ နားရွက်တွေကကော ဘာဖြစ်လို့ အကြီးကြီးဖြစ်နေရတာလဲဟင်..."
"ဒါဆို နှာခေါင်းကကော.. ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်အရှည်ကြီး ဖြစ်နေရတာလဲဟင်.. "
"ငါတို့ဟာ ဆင်တွေမဟုတ်လား.. ငါ့မြေးရယ်.."
အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်။ ။ ဟေ့ ကောင်မင်းတို့ ရတနာသေတ္တာကိုဘယ်နေရာမှာဝှက်ထားတာလဲ......
့သခင်ကြီးကမေးနေတယ်...သိရင်ဖြေလိုက်ပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ ....
...အဲဒီတော့ ဘာသာပြန်ကလဲသူပြောတဲ့ အတိုင်းပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာ...
ဘာသာပြန်။ ။မင်းဒီတစ်ခါမှမပြောရင်ခြေတွေလက်တွေဖြတ်ပစ်မယ်လို့ ပြောနေတယ်.......
ဒုတိယရွာသားကလဲမေးတိုင်းမဖြေပါဘူး...အဲဒီတော့ သူ့ ကိုလဲခေါင်းဖြတ်ပြီးသတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်တဲ့.... အဲဒီတော့နောက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ တာပေါ့ဗျာ..အဲဒီအချိန်မှာ
့မေးတာပေါ့ဗျာ...ရွာသားကပထမတစ်ခါတော့ ငြင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ....အဲဒီတော့ 
အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်က နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မေးမယ်.....မပြောရင်ဗိုက်ခွဲပြီးအူထုတ်သတ်ကွာလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်..ဘာသာပြန်ကလဲပြောတာပေါ့ဗျာ...မင်းကိုပြောနေပြီ...
နောက်ဆုံးပဲတဲ့...မင်းမပြောရင်ဗိုက်ခွဲပြီးသတ်မယ်တဲ့...ပြောလိုက်ပါ...မင်းပြောရင်အသက်ကိုချမ်းသာပေးကြမှာပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်....ရွာသားကလဲကြောက်လဲကြောက် အသတ်လဲမခံချင်တော့၊ ကျနော်တို့ ရွာနောက်ကရေတံခွန်ကြီးနားကလှိုင်ဂူထဲမှာပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်....အဲဒီတော့ဘာသာပြန်က။ ။သခင်ကြီးသူကအသေပဲခံမယ်...ဘယ်တော့ မှမပြောဘူးလို
့ပြောပါတယ်လို့အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကိုပြောပါတယ်တဲ့ ...
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးပေါ် သူခိုးဖမ်းစက်ရုပ် တစ်ခုကို တီထွင်လိုက်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ငါးမိနစ်အတွင်း သူခိုးတစ်ရာကို စက်ရုပ်က ဖမ်းပေးသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ငါးမိနစ်အတွင်း သူခိုး နှစ်ရာကို စက်ရုပ်က ဖမ်းပေးသည်။
ရုရားနိုင်ငံတွင် ငါးမိနစ်အတွင်း စက်ရုပ်ကို သူခိုးခိုးသွားသည်
Posted by Crystal at 8:01 PM0comments
http://www.lemongolfball.co.cc/ ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ တွေ့...